कोरोना त्रास: काठमाडौँबाट बाहिरिने क्रम ह्वातै बढ्यो, एकै दिन ९० हजार भन्दा बढी बाहिरिए ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कोरोना त्रास: काठमाडौँबाट बाहिरिने क्रम ह्वातै बढ्यो, एकै दिन ९० हजार भन्दा बढी बाहिरिए !
कोरोना त्रास: काठमाडौँबाट बाहिरिने क्रम ह्वातै बढ्यो, एकै दिन ९० हजार भन्दा बढी बाहिरिए !
पछिल्लो समयमा विश्वव्यापीरुपमा फैलँदै गएको कोभिड–१९ को सन्त्रासका कारण उपत्यकाबाट यात्रु बाहिरिनेक्रम शुरु भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार अरु दिनको तुलनामा पछिल्ला दिनमा उपत्यकाबाट घर जाने यात्रुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । उपत्यकाको नागढुङ्गा, जगाति, फर्पिङ र नागार्जुन नाकाबाट बाहिरिने सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ ।
नयाँ बसपार्क सञ्चालन गरेको ल्होत्से बहुद्देश्यीय प्रालीका महाप्रबन्धक सुनिल कुँवर विगतका दिनभन्दा हिजो र आज उपत्यका बाहिर जाने यात्रुको सङ्ख्या बढेको बताउँछन् । “नयाँ बसपार्कमा अरुका दिनभन्दा हिजोआज घर जानके यात्रुको भीड लागेको छ”, उनी भन्छन्।
घर जान आज बिहानैदेखि काठमाडौँको नयाँ बसपार्क, पुरानो बसपार्क, कोटेश्वर, कलङ्की क्षेत्रमा यात्रुको भीड लागेको थियो । महाशाखाका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठ कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा सकिएकाले बिदा मनाउनका लागि यात्रुहरु उपत्यका छोड्ने क्रम बढेको बताउँछन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई अनिवार्य मास्कको प्रयोग गन आग्रह गर्छन्। “हरेक यात्रुले आफ्नो सुरक्षा आफैँ गरे कोरोना भाइरस फैलन पाउँदैन”, उनी भन्छन्।
त्रिविको अत्यन्त जरुरी सूचना : चैत्र ६ गतेकाे परिक्षा स्थगित नहुने
स्वास्थ्य मन्त्री ढकालमाथि छानबिन माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी
‘वैशाख ३ पछि सीमित मात्रामा ठाउँ हेरी आउजाउ खोल्न सकिन्छ’